Ku xir, 2009 isbitaallada internetka - Gacmo galin
Juunyo, 2009 Baridda CAD / GIS, Microstation-Bentley
Sida isbedelka qaabka shirka sanadlaha ah ee Bentley, ku dooday in dhibaatooyinka caalamiga ah saameyn ku yeelan kartaa dadka isticmaala ay u safraan Mareykanka ee May, ka siminaaro online soo jeediyay ayaa la bilaabay in si loo gaaro ma ahan oo keliya kuwa ka qayb lahaa dhacdo laakiin aan lahayn ee fudaydka kharashka $ 2,000 ee kharashka ku bixi kara safaradan.
"Iyadoo in ka badan 150 dhaqanka iyo wax soo saarka ugu fiican siminaaro, taxanaha ah ee siminaaro online Lagu Connected waa habka ugu wanaagsan ee labada xirfadlayaasha iyo hoggaamiyayaasha ganacsiga ee kaabayaasha in ay sii kor ku isbeddellada ugu dambeeyay ee dhaqanka iyo technology, oo aan ka luminta wakhtiga iyo kharashyada ku lug leh safarka shir ",
ayuu yiri maamulaha suuq geynta Bentley, Ed Mueller.
"Waa wax ku saabsan mawduuca 'tayada xirfadeed ee xirfadeed', oo loo keenay miiskaaga bilaash ah"
Sidaa darteed, laga bilaabo Juun ilaa Nofembar, siminaaro badan oo 150 ah ayaa la qorsheeyey oo lagu riyaaqi karo raaxada miiska iyo xiriir joogto ah oo internetka ah.
Bilowga ma uusan iigu yeedhaan dareenka badan, gaar ahaan sababtoo ah waxaan ahaa faraxsanahay oo ku saabsan safarka sida caadiga ah aan ka qayb, laakiin hadda in la muujiyay shaqeynayaan Waxan u malaynayaa in haddii ay tani waa guul waxa laga yaabaa in Bentley go'aansado inuu si joogto ah la beddelo periodicity oo ka mid ah shir ama ugu yaraan muddadeeda si loo xoojiyo on The Inspired in kaliya dhowr maalmood. Tani waxay iga baqday in badan.
Balse fiiri in Bentley ay soo bandhigtay shahaadooyinka aqoonsiga ee Bentley Institute siiyay kuwa qaadanaya siminaarada. Ka sokow, waxaa suurtogal ah in laga tago internetka si loo arko marar badan oo loo baahan yahay, taas oo qiimo ka badan tan 25 daqiiqado ah oo ah shir nololeed.
Waxaa jira saddex nooc:
Submitted by xirfadlayaasha kaabayaasha adduunka oo dhan, kuwaas oo kulamo la keeno aragtida mashruuc ku saabsan dhaqanka wanaagsan ee design, dhismaha iyo hawlgalka noocyada gaarka ah ee mashaariicda kaabayaasha, oo ay ku jiraan taxanaha ah ee siminaaro on kasta oo ka mid ah kuwan soo socda Mawduucyada: buundooyinka, dhuumaha iyo horumarinta dhulka, isgaarsiinta, korontada iyo shirkadaha gaasta, macdanta iyo birta, saliida iyo gaasta, qaybta tareenada iyo gaadiidka, waddooyinka, biyaha iyo biyaha.
Waxyaabaha ku saabsan bentley
Waxaa soo bandhigay maamulayaasha ugu fiican ee Bentley oo loogu talagalay dadka isticmaala hadda iyo kuwa mustaqbalka, kulannadan farsamada ku salaysan farsamada waxay muujinayaan sifooyinka ugu dambeeyay iyo awoodaha V8i ee faylalka software ee loogu talagalay kaabayaasha joogtada ah.
Ku caan baxa noocyada hoose ee madaxa iyo ka warhaynta daaqadaha popup waa ugu dhib badan. Inkasta oo Mareykanka dhexdiisa ay caadi tahay in uu leeyahay xiriiro aad u deggan, shaqeyntuna ma noqon karto mid si gaar ah loogu talagalay nooca isticmaalaha. Weli dad badan ayaa doorbidaya 512 waana ku filan tahay, sidoo kale badankood waxay ku guuleysteen inay xalliyaan arrimaha muhiimka ah ee dhinaca safarka ah oo leh lacag yar iyo fariimo wanaagsan si aysan u luminin dulqaad.
Waan ka xumahay, qalad baa dhacay!
Qalabka ayaa la diiwaan geliyay, waxaana dib u eegi doona shaqaalahayaga farsamada. Dhanka kale, isku day inaad codsatid mar labaad ama Qor / Na soo wac si aad u heshid fursado dheeraad ah.
Ugu dambeyntii, ka shaqeynayaan ka baxo badan waxaa loo doonayaa, xitaa ka dib markii diiwaanka daruur to post aan saxaarad yimid oo labo maalmood ka dib raaligelin la dhaafi karin, laakiin mar la fahamsan hayn ee webmaster ah, maalka macluumaad mag.
Raadinta waxaa lagu sameyn karaa "dhammaan", "nool" iyo xitaa "marka la dalbado". Kadibna liiska waxaa loo xulan karaa adigoo u socda, taariikh ahaan, urur ama mawduuc.
Halkan waxaa ku qoran tusaalooyin siminaaro ku yaal aagga juquraafi ahaan:
Mabda'u maaha mid gaar ah
Shirkadda Microsoft Juun 24
Khariidadda Heerka Magaalada ee Magaalada
Hubinta Xaqiijinta iyo Xaqiijinta Diiwaangelinta Qorsheynta iyo Kuurgelidda Xaaladda
Diyaarinta Qorshayaasha Mucjiso Isticmaalka Khariidadaha Sayniska Sayniska
Qorsheynta Magaalooyinka Gkk iyo Cimilada C Sept 9,
3D Magaalada GIS
Kaalmaynta Boondhiga Dadweynaha, Macluumaadka Geospatial ee Maareynta Hantida
Oranjewoud BV Oktoobar
Real Estate iyo GIS: Tusi lacagta!
Nidaamka Gaadiidka Nederland (NS Poort) Oktoobar
Isku-dubarida macluumaadka geospatial ee deegaanka ganacsiga
Isticmaalka Istaraatiijada ESRI GIS-ga ee Deegaanka injineernimada
Dekedda Long Beach November
Kaba saarista macluumaadka ESRI ee Bentley Workflows Engineering
U Isticmaalka Tiknoolajiyada Tiknoolajiyada Si waxtar leh u Abuuri Isbeddelka Naqshadda
Engineers KASL November
Codsashada GIS-ga ee Khariidadaha Radar Video
Maamulka Duulimaadyada Federaalka November
Halkan waxaad ka arki kartaa nasteexo siminaaro.
Haa, sida aad aragtay, waxay dhammaantood ku yihiin Ingiriisi (sida muxaadarooyinka). Aan aragno in saaxiibadeena ka yimaada Amsterdam ama Mexico ay u horseedaan noocaan adeegyo ah dadka ku hadla luqada Isbaanishka, hadda waxay ku dhawaaqeen Awooda Awooda ee Spain iyo Awooda Awooda ee Latinamerica.
Post Previous«Previous Best of Micro Center
Post Next Wii, sida ugu fiican ee safarkaygaNext »